Media Mission Nepal आज फागुन शुक्ल पूर्णिमा, किन फरक छ तराई र पहाडको होली ? - Media Mission Nepal
आज फागुन शुक्ल पूर्णिमा, किन फरक छ तराई र पहाडको होली ?
Published On : 28 March, 2021 8:20 am
काठमाडौं, १५ चैत : आज रङहरुको पर्व फागु पर्व मनाइँदैछ । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ । आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा फागु पर्व मनाइँदैछ ।
होली अर्थात फागु पर्व परम्परागतरूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने प्राचीन परम्परा छ । हिमाल र पहाडमा आज होली मनाइने भए पनि तराईंका जिल्लाहरुमा भने भोलि सोमबार भव्यताका साथ मनाइन्छ ।
मुख्यगरी दुई दिन यो पर्व मनाउने गरिए पनि यसको औपचारिक सुरुआत भने होलीको चीर ठड्याएको दिनदेखि नै हुन्छ । यो वर्ष पनि यही चेत्र ८ गते बसन्तपुरमा चीर ठड्याएको थियो । उक्त चीरलाई आज टुँडिखेलमा विधिपूर्वक ढालेर जाइन्छ ।
यो वर्ष कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुनसक्ने भन्दै ठूलो भीडभाड नगर्न र स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाएर मात्रै रङ खेल्न सरकारले आग्रहसमेत गरेको छ ।
‘विष्णुपुराण’ अनुसार, ‘दैत्यराज’ हिरण्यकश्यपुले आफ्नो राज्यमा ‘भगवान् विष्णु’ को पूजापाठमा प्रतिबन्ध लगाएर आफूलाई भगवान घोषित गरी प्रजालाई आफ्नो पूजा गर्न निर्देशन दिएपछि उनका आफ्नै छोरा प्रल्हादले त्यसको अवज्ञा गरेर भगवान विष्णुको पूजा गरिरहे । आफ्नै छोरा प्रह्लादले आज्ञा नमानेपछि हिरण्यकश्यपुले रिसले बहिनी ‘होलिका’ को माध्यमबाट प्रल्हादलाई जलाएर मार्ने प्रयास गरे । ‘ब्रह्मा’ बाट आगोमा नजल्ने ‘बरदान’ पाएकी ‘होलिका’ ले प्रल्हादलाई काखमा राखेर आगोमा बसिन् । तर, आगोमा उल्टै ‘होलिका’ नै जलेर भष्म भइन्, प्रह्लाद जीवितै रहे । त्यसैलाई होलिका दहन भनिन्छ र होलिका दहनको भोलिपल्ट रंग अबीर लगाएर होली खेल्ने गरिन्छ ।